Kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7 kusvika 10 metres yakadzika | IPhone nhau
Nezuro ndakakuunzira mamwe mavhidhiyo airatidza iyo kuramba kwe iPhone 7 pasi pemvura. Imwe kuramba kwemvura isina kuvharwa newaranti yaApple, uye ndosaka tichifanira kuve nechokwadi tisati tageza ku iPhone yedu nyowani 7. Miedzo yacho inopa mhedzisiro, uye zviri pachena kuti iyo itsva iPhone 7 ine kuramba kukuru kwemvura pane izvo zvavanotiudza kubva kuApple.
Mimwe bvunzo iyo kubva pakuona kwangu ndiyo yainyanya kutarisirwa, ndinoziva kuti tese tinoda bvunzo dzemusango (pamagumo epositi iwe unogona kuwana kushamisika kwakanangana neichi) matiri kuona iPhone yakatsikirirwa, yakapiswa, nezvimwe ... Asi bvunzo dzemvura dzinobatsira nekuti dzinobvisa kutya kwemvura. Uye nhasi tinoenderera mberi nemimwe miedzo ine chekuita neiyi: kuramba kwemvura kweiyo nyowani iPhone 7. Ino nguva isu tine Samsung Galaxy S7 uye iPhone 7, ese akanyudzwa mukati mamamita gumi kudzika ... Mushure mekusvetuka isu tinokuratidza iyi nyowani kuramba bvunzo yeiyo nyowani iPhone 7, iwe unofunga kuti chii chichaitika?
Sezvauri kuona muiyo yapfuura vhidhiyo mhedzisiro yacho yakanaka kwazvo kune iyo iPhone 7. Maminitsi mashanu pakadzika kwemamita gumi (10 tsoka) kuratidza a Samsung Galaxy S7 inomira kushanda, uye iyo iPhone 7 inoshanda zvakakwana asi inotambura nedambudziko mune mamwe mapikisheni echiratidziri. Mimwe mhedzisiro yakanaka iyo Apple isina kutitaurira nezvayo, seyambiro.
Chinhu Chimwe Chinhu
Isu tatoona kuti kuramba kwemvura kweiyo nyowani iPhone 7 kwakapfuura izvo izvo vakomana vari pane bhuroka vanotiudza, ehe, iwe unofanirwa kungwarira. Asi unogona kufungidzira here donhedza yako nyowani iPhone 7 kubva kuhelicopter mukutiza? Kune zvakare humbowo hweizvi, uye izvo ndezvekuti iwe unongofanirwa kupa iyo iPhone kune chisina kujairika yemanetwork uye iye otanga kuita chero hupombwe neiyo iPhone. Ini ndotokuudza iwe kuti mhedzisiro haina kunyanyoipa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7 pakadzika kwemamita gumi
Yakafanana neAppleWatch nhevedzano 1, inoti haigoni kumira ichinyudza uye ini ndapinda mudziva nemahombekombe nayo, ndinongoigeza chete nemvura kuchenesa majoini ese uye ndizvozvo. Saka ndine chokwadi chekuti iyo iPhone 7 inogona kunyudzwa, chete Apple haizodi kuti isu tigare nayo zuva rese kuitira kana mumwe akakundikana uye apora muhutano
Ndakagadzira iyo kumusoro ios ios 10 kune yangu iPhone 5s uye pese pandinenge ndichida kuona mavhidhiyo avanazvo izvozvi, iPhone inotanga asi vhidhiyo ichivhara, pane chero munhu anoziva nei?
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri
Pindura kuna Erg